Ny Tranombokim-bahoaka ao New York dia hanome sary mihoatra ny 180.000 sy atiny bebe kokoa | Famoronana an-tserasera
Mansion Maniac dia kilalao an-tserasera noforonin'ny New York Public Library, izay amin'ny alàlan'ny fampiasana sary masina mitovy amin'ny Pac-Man dia ahafahan'ny mpampiasa mizaha ny gorodona samihafa amin'ilay trano ho an'ny iray amin'ireo trano mihoa-pampana indrindra tamin'ny taona voalohan'ny taonjato faha-XNUMX .
Fa ity lalao ity no tena teaseran'ny marketing fizarana indray ny fananana ara-tsaina miaraka amin'ny fisian'ny sary, carte postales, sarintany ary lahatsoratra hafa mihoatra ny 180.000 avy amin'ny tahiry manokana an'ity tranomboky ity hahafahan'ny mpampiasa rehetra misintona azy ireo amin'ny vahaolana avo lenta.
Ny fivezivezena dia nihanaka tokoa nanomboka ny folo taona lasa izay misy tranomboky, tranombakoka ary andrim-panjakana hafa efa nijery lahatsoratra an-tapitrisany ary avy eo ento amin'ny Internet. Saingy ny fandraisana andraikitra, izay efa an-tserasera nanomboka ny alarobia, dia mihoatra ireo fomba fanao ireo mba hametrahana ny teboka fanombohana zavatra iray izay hatao mba hahafahan'ny tsirairay miditra amin'ny votoatin'ny kolontsaina lehibe.
Efa misy andrim-panjakana maro izay nametraka ny marika "Atiny malalaka na misokatra". Raha ny fandraisana andraikitra vaovao an'ity tranomboky ity dia iray amin'ireo lehibe indrindra azo avy -pirenena mozea Any Amsterdam, dia miavaka amin'ny habeny ihany koa izy.
Ny tena maha samy hafa azy dia ny atiny rehetra ho afaka maimaim-poana ho fisintomana eo noho eo, ankoatry ny interface interface, fantatra amin'ny anarana hoe API, izay ahafahan'ny mpandraharaha mampiasa azy ireo mora kokoa. Ho afaka hiditra amin'ny fampahalalana avy amin'ny tahiry anatiny ny mpampiasa, izay hahafahan'izy ireo hahafantatra hoe iza ireo lahatsoratra afaka.
Ny iray amin'ireo safidy dia ny fampiasana an'ity tahiry goavambe ity mijery sary toy ny amin'ny Street View izay ahafahanao mahafantatra hoe nanao ahoana ny Fifth Avenue taloha, mba hampitahanao izany amin'ny toerana misy azy avy amin'ny Google app.
Una tolo-kevitra mahaliana be azonao atao ny miditra aminy Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny New York Public Library dia hamoaka sary, carte postales ary bebe kokoa maherin'ny 180.000
Fisafidianana lohahevitra Wordpress izay misy ny fironana amin'ny Internet 2016